Klopp: Laacibiinta lacag-raacatada ahi malahan anshax iyo xeer. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Klopp: Laacibiinta lacag-raacatada ahi malahan anshax iyo xeer.
Klopp: Laacibiinta lacag-raacatada ahi malahan anshax iyo xeer.
England – Tababaraha kooxda Liverpool, Jurgen Klopp ayaa ku hal-adag inuusan dooneyn la saxiixashada ciyaaryahan ku dhagan ama fikirkiisa ugu weyn ee uu ka leeyahay kubadda cagta ay tahay sameynta adduun lacageed.
Hadalkiisa ayaa daba socda kadib ku dhicista wada-hadal naadigu lalahaa Julian Draxler, oo katirsan kooxda reer Jarmal ee Wolfesburg kaas oo doorbiday inuu ku biiro kooxda dhaqaalaha ku fadhisa ee Paris Saint Germain.
Klopp wuxuu sheegay inuu dhib ku qabo sida uu ula saxiixan karo ciyaaryahan kaliya ku dhaqan helidda adduun lacageed balse aan mihnaddiisa kalaheyn hiigsi fog.
“Waxay ila tahay lacag sameyn iyo anshaxa kubadda cagta inaysan isku meel wada gelin,” ayuu u sheegay war-fidiyeenka.
“Ciyaartoydu waa inay gartaan inay lacag sameyn karaan: balse hadafka ugu weyn ee ay ka yeeshaan kubadda cagta ma noqonayso.”
Klopp ayaa sidoo kale dareensan in lacagtu aysan noqon karin sabab heyn karta laacibkii raba inuu faarujiyo gegida Anfield ee kooxda. Wuxuuse fahamsan yahay in kooxo badan ay yihiin kuwo adduun badan kusoo jiidan kara laacibiinta.
“Qofna uma ahan inuu sababo lacageed uga tago kooxda.”
Liverpool ayaa booska labaad kaga jirta kala horreynta England PL.
Previous: Oscar oo ugu danbeyntii rikoor cusub kula biiraya kooxda Shiinaha ka dhisan
Next: Khubaro Sucuudiyan iyo Ukrainian isugu jira oo sameeyey diyaarad dagaal